Wonke uhambahamba evulekile kubalulekile kuyo yonke inja. Oku kwenziwa kuphela ukuhlangabezana neemfuno zendalo ngaphandle kweendonga zendlu, kodwa kwakhona, ngokubaluleka ngokulinganayo, ukuze ugcine impilo kunye nokukhuseleka kwezilwanyana zakho kwinqanaba elifanelekileyo. Kodwa kukho iziphakamiso ezininzi eziqhelekileyo ezimele zilandelwe ngabo bonke abanikazi beenja.
Indlela yokuhamba kakuhle inja, imigaqo ejwayelekile kuyo yonke imveliso:
Hamba inja, kwakunye nokutya, akufanelekanga ngaphezu kwabantu abathathu ukusuka kwintsapho. Oku kuya kukukhusela ekungathobeli isilwanyana kunye nomngcipheko wokulahleka ngexesha lokuhamba.
Ukuhamba nenja kukhethwa phambi kokutya. Umlinganiselo omdala weenja zasezidolophini ngokuqhelekileyo ufuna iimitha ezimbini ngosuku malunga nemizuzu engama-30. Okokuqala kufuneka unike isilwanyana sakho esininzi ukuba siphumelele, sizinikezele ngokunyanisekileyo kwaye siqale ukusebenza ngamaqela ukuba ukuhamba kudibene nenkqubo yoqeqesho.
Ukujwayela inja ukuhamba kufuneka ibe kwiindawo ezikude kwindlela, ngaphandle kwezinye izinja kunye nokuxinana okukhulu kwabantu. Zonke ezi zinto ziphazamisa isilwanyana sakho kwaye ziyakwenza ukuba ujabule kwaye ungakwazi ukulawula. Ukuziqhelanisa nokusingqongileyo kufuneka kuhambe ngokukhawuleza, ukuze inja yakho ingaphumeleli. Kodwa, ngelo xesha, akudingeki ukuba uphinde uphinde uphume kwakhona, unike imiyalelo eyahlukeneyo kwaye uyiqwalasele.
Ukuhamba kwiimeko zasezidolophini kubaluleke kakhulu ukufundisa inja ukuhamba nge-leash. Ikhola kufuneka ikhethwe ngokuchanekileyo, ngokukhawuleza ifanele intamo yenja ukuze ingakwazi ukuyikhupha. I-Leash kufuneka ikhethwe kunoko, kodwa kunye nokulungiswa okongeziweyo. Ngaphambi kokuba uqale ukuhamba kunye nesilwanyana sakho, makabe esetyenziselwa ikollar kwaye ahlawule ekhaya.
Ukuba inja yakho iseyintsana encinane, kodwa sele idlulile zonke izitofu ezifunekayo, kufuneka umthabathe esitratweni ngokuphindaphindiweyo, imizuzu eyi-15-20 emva kokuba uyondle kwaye emva kokuvusa. Kulo mzekelo, kufuneka uqaphelisise ukuziphatha kwakhe: ngokukhawuleza xa eqala ukuxabana, ugijime malunga nekhenkethi ukukhangela kwikona ecocekileyo, umele uwathabathe ngokukhawuleza uze uyithwale kwisitalato. Musa ukuhamba kunye nesilwanyana sakho ngendlela efanayo, vumela ukuba uhambo lube luhluke ngakumbi kwaye lunomdla, oluya kuvumela inkuku ukuba ikwazi kakuhle ihlabathi elijikelezile.
Indawo ezihlaza, izikwere kunye neepaki ziindawo ezifanelekileyo zokuhamba inja, ngokusondeleyo kumbuzo. Ngokuya kwizikolo, i-kindergartens kunye neendawo zokudlala (nakwiimimandla yazo), ukuhamba kweenja kuvinjelwe. Ehlotyeni, ukuba kunokwenzeka, kufuneka sithathe izilwanyana zethu ezinezinyawo zendalo. Khumbula ukuba yonke inja idinga ixesha elide, lihamba ixesha elide.
Abanye abanikazi beenja bayaqiniseka ukuba inja endala yomntu omnye ngosuku iwanele. Oku kungalunganga ngokukodwa. Oku kunokwenzeka ukuba, le ngcamango ivela ngenxa yobuvila bokuqala okanye umsebenzi wabanini. Ukuhamba nganye (ubuncinane amabini ngosuku, kunye neentlobo eziphakathi-ezintathu) kufuneka zenze okungenani imizuzu engama-25 (ebusika, kwiqhwala ezinzima, unokuhamba imizuzu eyi-10-15 ukuze ungabinzima inja).
Kukulungele ukuhamba inja ebusika
Ubungakanani bokuhamba kwebusika buchaphazeleka ngokubaluleka kwenja. Kunoko, ukufaneleka kwalo mhlobo othile kwiimeko zemozulu zemo. Kuyinto engokwemvelo ukuba izinja ezifutshane kunye neentlobo ezincinci kwisitrato ziyaqhwala ngokukhawuleza kunabanye abantu abanobuhlwempu - iNewfoundland okanye i-chauuchau. Kwakhona ngexesha lokuhamba kwebusika, kufuneka ubeke ingqalelo kwimpilo yenja. Ukuba umzimba wakhe ubuthathaka ngenxa yokugula, akanako ukujamelana nokuhamba okude kwiqanda. Konke oku kusebenza kwizinja ezigonyelwe.
Ukuhamba ngokupheleleyo kukunceda izilwanyana zakho zihlale ziphilile kwaye zizinzile. Ngenxa yobume babo, izinja zisetyenziselwa ukuhlala zihlala endleleni, ngoko kufuneka uqikelele oku kwaye unike inja yakho inani elifanelekileyo.
Unokukhetha njani i-parrot efanelekileyo?
Izifo zezinja eziyingozi kubantu
Indlela yokufundisa ikati ukuba ungesabi ukuphatha iibhegi
Ukuqeqeshwa kwezilwanyana ngamanqanaba ahlukeneyo entlangano
Umculi oyingqungquthela uGenady Khazanov
Ukuzivocavoca umzimba ukuqinisa umlenze
UGwyneth Paltrow, umhla wokuzalwa
Ibhotela le Buckwheat kunye namaqanda abilisiwe
Isisu esisisigxina: izivivinyo ezifanelekileyo
Iibisiki ze-Citrus kwi-glaze
Ukuphulukiswa kunye neempawu zomlingo we-nepheline
I yingozi kakhulu! Isitayela saseRashiya eHollywood
Umtshato uyisiganeko esibalulekileyo kwisithuba ngasinye
Ubuhle obuqondayo: ukuqokelela kwexesha lonke kwi-Course
USvetlana Permyakova: ukusuka kwi-KVN ukuya ku- "Internov"
Izizathu, imiphumo kunye nokunyangwa kokutya
Ubomi obuhle bomfazi